Liverpool iyo Chelsea oo ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahan si weyn u soo jiitay kooxaha yururb – Gool FM
(England) 25 Jan 2019. Liverpool ayaa kula soo biirtay kooxda ay sida weyn u dagaalamaan ee Chelsea loolanka saxiixa laacibka khadka dhexe kooxda Brescia ee Sandro Tonali.
Warbaahinta Talyaaniga ayaa shaacisay in Liverpool ay indhaha ku heyso da’ayarka kooxda Brescia ee Sandro Tonali, laakiin waxay loolan adag kala kulmi doonaan kooxo ay ka mid yiniin Juventus, AC Milan iyo Chelsea.
Wargeyska “Corriere dello Sport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in tababaraha Liverpool Jurgen Klopp uu si weyn ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka 18 jirkan lagu naaneyso Andrea Pirlo-ha cusub ee kubada cagta.
Yeelkadeed, macalinka reer Germany ee Jurgen Klopp ayay wararku sheegayaan inuu isha ku hayo suurtagalnimada uu Sandro Tonali qeyb kaga dhigi lahaa qorshihiisa kooxda Liverpool xiliyada soo aadan.
Chelsea ayaa sidoo kale dooneysa inay la saxiixato Sandro Tonali, maadaama dhankiisa tababare Maurizio Sarri uu xiiseenayo inuu sameeyo saxiixa laacibkan, si uu u kordhiyo tartanka xidigaha shaxda kooxda Blues.
David Luiz oo si weyn ugu amaanay saaxiibadiis guushii muhiimka ahayd ay xalay ka gaareen kooxd Tottenham